EZCAD3 chizvarwa chitsva che laser yekumaka software, ine nyika-inotungamira chirongwa uye laser kudzora tekinoroji. Iyo yekuvandudza yeEZCAD2 inomiswa zviri pamutemo muna 2019. Chinyorwa ichi chinokutungamira iwe kukwidziridza yako yazvino controller uye software kune yazvino vhezheni neazvino maitiro.
Nderipi rimwe basa?
1. Pre-Wiring (JCZ ichaita)
Pini yeiyo LMC inodzora (Inoshanda neEZCAD2) yakasiyana neye DLC controller (Inoshanda neEZCAD3). JCZ ichagadzira vashanduri kuti vaone kuti hapana wiring inodikanwa.
2.Different Power Supply (JCZ ichaita)
Mutungamiriri weLMC, anoshanda neEZCAD2） anoshandisa DC 5V 2A simba. Asi DLC controller (inoshanda neEZCAD3) inoda DC 12V 2A simba.
JCZ ichapa rimwe Mini DC 12V 2A simba semufananidzo uri pazasi.
3. Re-calibration. （Nemavhidhiyo tutorials）
EZCAD3 inoshandisa yakanyanya calibration nzira kudzikisira kukanganisa uye kuwedzera kunyatso.
Isu tinopa vhidhiyo tutorials yekukutungamira iwe kuti uite chaiyo chaiyo calibration, iyo inotora ingangoita gumi nemashanu maminetsi. Ndokumbirawo mugadzirire mutongi pamberi.
4. 64-bits O / S Chete
EZCAD3 ine 64-bit kernel, iyo yakawedzera zvakanyanya mashandiro eiyo software. 64-bit inoshanda sisitimu inodikanwa uye WIN10 ine makumi matanhatu nematanhatu inokurudzirwa.
5. Software Re-kumisikidza (JCZ ichaita)
Mamiriro ezEZCAD3 akatosiyana zvishoma neEZCAD2. JCZ ichaita pre-seti yako zvinoenderana neyako marongero aripo.
6. Kuisa Kwakasiyana.
Chiyero cheDLC controller (chinoshanda neEZCAD3) chakasiyana neLMC controller (inoshanda neEZCAD2), zvinoreva kuti kana makabati emuchina wako asina nzvimbo yakakwana, unofanirwa kuiisa kunze kwekabineti.
Mhando nhatu dzesarudzo yemutongi inowanikwa pazasi.
A: Yakashama yakapetwa kaviri-dura controller. Unogona kuisa mukati memuchina wako kana paine nzvimbo yakakwana kana kuiisa kunze kwekabineti pasina chengetedzo.
B: DLC inodzora ine mabutiro. Kana muchina wako kabhodhi isina nzvimbo yakakwana, inogona kuiswa kunze kwemuchina zvakachengeteka.
C. DLC inodzora ine maindasitiri PC akabatanidzwa. Ingo gadzirira one monitor uye uiise kunze kwemuchina cabinet.
Kuzadza MuFomu nemaGwara pazasi.
1. Tora pikicha yemuchina wako wakakwana woiisa.
Iyo pikicha yemuchina wese ichatipa yakajairika pfungwa yekugadziriswa kwemuchina wako.
Tora mifananidzo yezvikamu zvikuru uye uzviise ..
Vhura kabati yemuchina wako, uye utore mufananidzo weanodzora uye laser sosi, pamwe neiyo galvo scanner, iyo yakaiswa kunze kwekabineti. Ndokumbirawo ubatanidze modhi uye serial nhamba kana paine imwe.
Mutungamiriri (Mukati meKabineti)
Laser Kunobva (Mukati meKabineti)
Galvo Scanner (kunze kweKhabhinethi)
3. Dzvinyirira EZCAD2 software folda uye woiisa.
Dzvinyirira dhairekodhi reEZCAD2 uye riise mufomu. Izvi zvichashandiswa kuita pre-kumisikidzwa kweEZCAD3.
4. Simbisa zvinoshandiswa.
Kuzadza fomu pazasi zvakadzama kuitira kuti tikwanise kusimbisa kuwanikwa kwekusimudzira uye kuita pre-wiring uye pre-kuisa pamberi pekutakura.